कोेभिड १९ ले हामीलाई पनि प्रभावित पार्यो । लकडाउनको समस्या सबैले भोगियो । तर पनि बुटवल टुडे राष्ट्रिय दैनिकको नवौं बार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा आज हामीलाई गर्भानुभूति भइरहेको छ । रंगीन कलेबरम...
कोेभिड १९ ले हामीलाई पनि प्रभावित पार्यो । लकडाउनको समस्या सबैले भोगियो । तर पनि बुटवल टुडे राष्ट्रिय दैनिकको नवौं बार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा आज हामीलाई गर्भानुभूति भइरहेको छ । रंगीन कलेबरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा निरन्तर रुपमा पत्रिका प्रकाशित गर्नु मजाकको विषय पक्कै हैन । अनेकौँ समस्यासँग जुध्दै हामीले पाठकहरुलाई हरेक दिनको प्रभातमा यो वा त्यो माध्यमबाट नयाँ खोजयुक्त समाचार तथा विचारहरु पस्कन सक्यौँजस्तो लाग्छ । र, नै आज हामी निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ कि हाम्रो...
विकास निर्माणको एउटा चरणमा संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू सबैतिर हुने गर्छन् । यसरी निर्माण कार्य भइरहँदा नदीजन्य पदार्थको ब्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्छ । खासगरी बालुवा, गिट्टी, मिस्कट आदि न...
विकास निर्माणको एउटा चरणमा संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू सबैतिर हुने गर्छन् । यसरी निर्माण कार्य भइरहँदा नदीजन्य पदार्थको ब्यापक मात्रामा प्रयोग हुन्छ । खासगरी बालुवा, गिट्टी, मिस्कट आदि नदीबाटै ओसार्ने गरिन्छ । यो नौलो कुरा होइन । नगरपालिकाहरूले उपभोक्ताको मागअनुसार सडक निर्माण गर्ने गर्छन् । त्यसरी नै प्रदेशीय तथा राष्ट्रियस्तरका आयोजनाहरू पनि बनाउने गरिन्छ । सार्वजनिक महŒवका देखि निजी आबास बनाउनको लागि नदीजन्य पदार्थ नै प्रयोगमा आएको हुन्छ । तर, ढुंगा, बा...
आज सिता विवाह पञ्चमी हो । नेपालका पौराणिक कालका अत्यन्तै परिश्रमी, न्यायदाता, जनताका पालनकर्ता राजा जनकले आफ्नी छोरी सिताको अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग विवाह गरिदिएको दिनको रूपमा प्र...
आज सिता विवाह पञ्चमी हो । नेपालका पौराणिक कालका अत्यन्तै परिश्रमी, न्यायदाता, जनताका पालनकर्ता राजा जनकले आफ्नी छोरी सिताको अयोध्याका राजा दशरथका छोरा रामसँग विवाह गरिदिएको दिनको रूपमा प्रख्यात छ । सिताको उत्पत्ति, उनको शक्ति, रामको कार्यकुशलता, बहादुरी र आज्ञापालन हिन्दु समाजमा अत्यन्तै पूजनीय छ । रामलाई हिन्दुहरूले भगवानको एक अबतारको रूपमा मान्यता दिएका छन् भने सितालाई सच्चरित्रकी देबीको रूपमा मान्दै आएका छन् । सिताको जन्मका सम्बन्धमा अपत्यारिलो किंबदन्ती रहेको...
आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हो । मानव अधिकारको परिभाषा निकै फराकिलो छ । अधिकारका कुरा गर्दा एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । जुन प्रकृतिले मानिसलाई प्रदान गर्दै आएको छ । जन्मन पाउने अध...
आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हो । मानव अधिकारको परिभाषा निकै फराकिलो छ । अधिकारका कुरा गर्दा एउटा नैसर्गिक अधिकार हुन्छ । जुन प्रकृतिले मानिसलाई प्रदान गर्दै आएको छ । जन्मन पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, हिँड्न पाउने अधिकार, खेल्न, हाँस्न, बोल्न पाउने अधिकार, प्रेम गर्न, दाम्पत्य जीवन कायम गर्न पाउने यी नैसर्गिक अधिकार हुन् । यिनै नसैर्गिक अधिकारको जगेर्ना गर्न वा यसलाई ब्यबस्थित गर्नको लागि संबैधानिक मानवअधिकार ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । जसलाई कानुनी अधिकार...
रूपन्देहीको देवदहमा सुन्न नै नसकिने बलात्कारको घटना घट्यो । गौतम बुद्धको मावली स्थान रहेको तपोभूमि क्षेत्रमा पाँच वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ भन्दा झट्ट पत्याउन गाह्रो हुन्छ...
रूपन्देहीको देवदहमा सुन्न नै नसकिने बलात्कारको घटना घट्यो । गौतम बुद्धको मावली स्थान रहेको तपोभूमि क्षेत्रमा पाँच वर्षीया बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ भन्दा झट्ट पत्याउन गाह्रो हुन्छ । तर, ती बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले छ जना स्थानीय युवालाई पक्राउ गरेको छ । जसमध्ये २ जना बलात्कारी भएको पुष्टि भइसकेको छ भने पक्राउ परेका अन्यमाथि थप अनुसन्धान शुरु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका इन्सपेक्टर ऋषिराम घर्ती मगरले बताएका छन् । पक्राउ परेकाहरूमा देव...
नागरिक उड्डयनका कुरा (सम्पादकीय)
पैसा हुने मानिसहरू अहिले विभिन्न देशमा आवागमन गर्नको लागि वा आफ्नै देशमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छिटोछरितो रूपमा जानको लागि जहाजको प्रयोग गर्छन् । जहाजको यात्रा सडक यात्राभन्दा महँगो हुन्छ...
पैसा हुने मानिसहरू अहिले विभिन्न देशमा आवागमन गर्नको लागि वा आफ्नै देशमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा छिटोछरितो रूपमा जानको लागि जहाजको प्रयोग गर्छन् । जहाजको यात्रा सडक यात्राभन्दा महँगो हुन्छ । तर, छिटै गन्तब्यमा जान सकिन्छ । यसमा गरिने यात्रालाई अन्य खालका यात्राभन्दा सुरक्षित पनि मानिन्छ । विदेशका विभिन्न मुलुकमा अहिले नेपालबाट थुप्रै मानिस कामको खोजीमा जाने गर्दछन् । फर्केर आउने गर्दछन् । उनीहरूलाई बस वा रेलबाट जान लामो समय लाग्छ, अनेक प्रकारका झञ्झटहरू ब्यहोर्नु...
बालाचतुर्दशी र कृषिको सम्बन्ध (सम्पादकीय)
आज बाला चतुर्दशी हो । यसलाई सप्तबिज छर्ने चतुर्दशी पनि भनिन्छ । विभिन्न शिवालय मन्दिरमा गई सात प्रकारका अनाजहरू मिलाएर छर्दा छर्ने मानिसका पितृहरूले मोक्ष प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको आत्मा तृ...
आज बाला चतुर्दशी हो । यसलाई सप्तबिज छर्ने चतुर्दशी पनि भनिन्छ । विभिन्न शिवालय मन्दिरमा गई सात प्रकारका अनाजहरू मिलाएर छर्दा छर्ने मानिसका पितृहरूले मोक्ष प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको आत्मा तृप्त हुन्छ, जहाँ छन् यसरी छरिएका अनाजहरू त्यहाँ गएर उम्रन्छन् र ती उम्रेका अनाज फलहरू पितृहरूले खान पाउँछन् भन्ने मान्यता रहेको छ । यसरी छरिने सप्तबिजमा धान, गहुँ, जौ, काबुन, मास, मुगी र सामालाई मानिएको छ । काठमाडौँको पशुपतिनाथ, श्लेषमान्तक, अन्य विभिन्न स्थानमा रहेका शिवालय मन्दि...
हराउँदै सदाचारिता (सम्पादकीय)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा. तारानाथ पौडेललाई एक लाख रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको छ । अहेवको अन्तवार्तामा पास गराइदिने...
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख डा. तारानाथ पौडेललाई एक लाख रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरेको छ । अहेवको अन्तवार्तामा पास गराइदिने भन्दै जाँचमा बसेको विद्यार्थीबाट उनले घुस लिएका थिए । स्वास्थ्य सेवाका ११ औँ तहका अधिकृतले एक लाख रूपैयाँमा यसरी ¥याल छाड्छन् भने कर्मचारीतन्त्र भित्र घुस प्रबृत्ति कतिसम्म मौलाएको होला अनुमान गर्न कठीन छैन । उनी पहिले पनि विवादित रहेका थिए । त्यसैकारणले पनि हुन सक्छ घुसदाताल...
अपांगङ्गता दिवस र अवस्था
आज अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस हो । यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीले खोजेको भविष्यका लागि १७ ओटा उद्देश्यहरू भन्ने नाराकासाथ विश्वभरी नै अपांगता दिवस मनाँउदै छ । नेपालमा पनि यो दिवसलाई य...
आज अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस हो । यसपटक संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीले खोजेको भविष्यका लागि १७ ओटा उद्देश्यहरू भन्ने नाराकासाथ विश्वभरी नै अपांगता दिवस मनाँउदै छ । नेपालमा पनि यो दिवसलाई यो वा त्यो प्रकारले मनाउने गर्दै आइएको छ । सन् १९९२ डिसेम्बर तीन देखि नै निरन्तर रूपमा मनाउने गरिँदै छ । बिश्वब्यापी मान्यतामा १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकारबाट अपांग हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ यो दिवस विश्वका १५ प्रतिशत मानिससँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । जुन अपांग छन् । विश्व जनसं...
दासता उन्मुलनका कुरा (सम्पादकीय)
आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस हो । कुनै समय यस्तो थियो जुन सामाजिक संरचनालाई दास मालिक समाज भनिन्थ्यो । आदीम साम्यवादी समाजको अन्त्यपछि दास मालिक युग ल्याइयो । जुन समाजमा मालिकहरूल...
आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस हो । कुनै समय यस्तो थियो जुन सामाजिक संरचनालाई दास मालिक समाज भनिन्थ्यो । आदीम साम्यवादी समाजको अन्त्यपछि दास मालिक युग ल्याइयो । जुन समाजमा मालिकहरूले कतिपय जितेका क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई बन्दी बनाएर आफ्नो राज्यमा ल्याउँथे र उनीहरूलाई काममा जोताउँथे । भागेर जान नपाओस् भनेर कतिले बाँधेर राख्थे भने कतिले कोठामा थुनेर राख्ने गर्ने । चौबिस घण्टामा चार पाँच घण्टा बाहेक सबैभन्दा अफ्ठेरा काममा उनीहरूलाई जोताउँथे । पेटभरी खान दिइँदै...